Gumiguru nhau munhoroondo uye mhosva dzemabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Gumiguru nhau munhoroondo uye nhoroondo dzematsotsi
Gumiguru, yakazara matsutso. Nhau edhisheni muzvinyorwa zvekare uye zvematsotsi emazita akafanana neaayo Arturo Pérez-Reverte, Philip Kerr, Sebastián Roa, I. Biggi kana Michael Connelly. Pane ongororo yesarudzo iyi yemazita matsva ayo anouya nenyaya kubva kuAntiquity, Hondo Yenyika, zana ramakore regumi nenomwe, Hondo Yenyika Yechipiri neyezvino mukudzoka kwemutikitivha Harry Bosch.
1 Mutsara weMoto - Arturo Pérez-Reverte
2 Nerima Nyaya - Philip Kerr
4 Moses Chirongwa - I. Biggi
5 Moto Usiku - Michael Connelly
Mutsara wemoto -Arturo Perez-Reverte
Zvakatora Pérez-Reverte nguva yakareba kuti abatane ne Civil War muchimiro cheinovhurika, kunyangwe paine asingaverengeke tweeting diatribes iyo inoisa manetwork pamoto zuva rega rega nguva dzese nyaya painouya. Saka pano anotiunzira chiono chake cheimwe yeanonyanya kusarudza, akaomarara uye ane ropa zvikamu zvemakwikwi: iyo Hondo yeEbro, yakaitika muna Chikunguru 1938.
Pahusiku hwaJuly 24 kusvika 25, 2.890 varume uye gumi nevakadzi ve XI Akavhenganiswa Brigade weHondo yeRepublic kuyambuka rwizi kuti usimbise zambuko re Castelets del Segre, uko kwavacharwa kwemazuva gumi. Ivo ndivo mavara, nzvimbo uye mamiriro akagadzirwa nemunyori kuti vadzokezve ino nguva, asi chokwadi kana mazita chaiwo kumashure uye kwavakafemerwa hakuna.
Iye ane chokwadi chekusaodza moyo kana vatsigiri vake vakaomarara kana vashori vake vane hasha.
Nyaya yakasviba - Firipi Kerr
Kerr vakatisiya makore maviri apfuura, asi musiki wemutikitivha Bernie pfuti Ndakanga ndichine zvakawanda zvekunyora uye kutsikisa. Takatambira zvino mbiri mbiri, Unyanzvi hwematsotsi, iyo yakabuda pakati pemwedzi wapfuura, uye ikozvino izvi musoro nhoroondo yakaiswa mukupera kwezana ramakore rechiXNUMX London.
Tiri muna 1696 uye tinosangana Christopher Ellis, ndiani mukomana wechidiki anofarira tsamba uye vakadzi vanotumirwa kuTower yeLondon, asi kwete semusungwa. Fate inoda kuti Ellis ave iyo Sir Isaac Newton mutevedzeri mutsva, iyo kunze kwekuva yesainzi, iri zvakare mutariri wekutevera vanyepedzeri vanotyisidzira kudzikisa hupfumi hweChirungu.
Saka vaviri vacho vachaumba chakati matikitivha vaviri avo kubvunza kunovatungamira kune a asinganzwisisike meseji mune kodhi inoonekwa pamusoro pe chitunha yakavanzwa muShongwe yeShumba.
Sebastián Roa nderimwe remazita makuru enhoroondo yenhoroondo yekumusha. Mune ino nyowani nyowani anotitora isu kuenda ku kurapa hondo nechikurudziro chekuti mukadzi nyeredzi mariri, Artemisia yaCaria. Uye muchimiro chekutaurirana nejaya Herodotus, achatiudza nezve hupenyu hwake hunonakidza.
Muzana ramakore V. C. Artemisia anotonga Halicarnassus, guta rakavimbika kuumambo hwePezhiya. Captain zvako chikepe chehondo, iyo Nemesis, iyo ichaenda nayo mukutsvaga mutyairi weAtene Chikonzero chekudonha kubva munyasha yemhuri yake uye nhamo dzese dzakaitika vasati vauya musimba. Uye vese nemumvuri wehondo inoenderera pakati pePersia nemaGreek.
Moses Project - I. Bhigi
Kuna I. Biggi, kunze kwekuverenga yake Valkyries, Ndakafara bvunzurudza iye mwedzi mishoma yapfuura mushure mekukunda iyo Cerros de Úbeda Mubairo wenhoroondo dzekare. Iye zvino buritsa iyi nyowani nyaya kwatinoenda kumagumo e Hondo Yenyika Yechipiri.
Mukutanga kwezhizha kwe 1945, purofesa wekuSpain akadzingwa anonyevera kuti maGerman ane chombo chitsva chinotyisa ane musiki, musayendisiti wechiJuda, anovimbisa kuti anogona kupera nekumwe kuputika nemauto ese akamirira kumaodzanyemba kweEngland.
Asi iyo Allied Yakakwira Command haina chokwadi. Kunyange zvakadaro, Winston Churchill kuronga basa re rairo ndiani achatungamira anypical North North colonel nevamwe vasina tariro. Saka, ivo vachapinda Nazi Germany kuwana uye kupedza kutyisidzira kwebhomba iro.
Moto weusiku - Michael Connelly
Ini ndinopedzisira ne yakasarudzika yeNorth America mhosva yekufungidzira ano. Michael Connelly anodzoka neyake LAPD mutikitivha inonyanyo kuzivikanwa uye kuteverwa, isina moto Harry Bosch, saka vateveri vako isu tiri muhombe. Zvakanaka, kupfuudza iyo monkey pakati penyaya uye novel, pane iyo yakanaka TV dzino, inokodzera chinyorwa chayo pachayo.
Nth zita rinotisvitsa kuBosch zvakare tichisanganisa masimba neiyo Detective Renée Ballard mune imwe nyaya iyo inotora Bosch kudzokera kuhudiki hwake apo aive rookie Homicide detective. Wako chipangamazano kubva ipapo zvaive John jack thompson. Iye zvino afa, uye mushure mekuvigwa kwake, chirikadzi yake inopa Bosch mushumo wekuponda kwakatora Thompson paakasiya mapurisa. Zvayo ndezve yakavhurika nyaya yekupondwa kwejaya. Bosch anonyorera Ballard kuti amubatsire kuona kufarira kwaThompson maari makore ese apfuura. Mubvunzo unomuka pavanoshamisika kana Thompson akachengeta mushumo kuti ashande pane iyo kesi mukurega kwake basa kana kuve nechokwadi icho hazvina kumbogadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Gumiguru nhau munhoroondo uye nhoroondo dzematsotsi